An hangan suuraalee rifaasisoo armaan gadii kana argetti Baalee keessas Oromoonni buqqa’anii haala gaddisiisaa keessa jiran jiraachuu quba hin qabun ture – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAn hangan suuraalee rifaasisoo armaan gadii kana argetti Baalee keessas Oromoonni buqqa’anii haala gaddisiisaa keessa jiran jiraachuu quba hin qabun ture
An hangan suuraalee rifaasisoo armaan gadii kana argetti Baalee keessas Oromoonni buqqa’anii haala gaddisiisaa keessa jiran jiraachuu quba hin qabun ture.
Ana qofas osoo hin taane namoonni baay’een waa’ee buqqaatota keenya godina kana keessaa dilas waan quba qabaachaa turan natti hin fakkaatu. Lakkoofsi buqqaatotaa guddaan Harargee keessa tahuun hin haalamu tahullee, ummanni keenya Abdi Ileedhaan buqqa’ee gara Baaletti deebi’e bifa kana keessa jiraachuun nama dhukkubsa.
Gaaffiin koo garuu maaliif hanga ammaatti dhokatee dha? Eenyutu dhokse? Qaamonni miidhaa ummata irra gahaa jiru kana dhoksan yakkamoo dha. Seerattuu dhihaatanii gaafatamuu qabu. Keessattuu ummanni kun beelaan miidhamee hanga sadarkaa kana gahutti eeguun maaliif akka barbaachise naaf hin galu.
Amma waan darbeef abbaa qeeqamu qeequu osoo hin taane ummata kanaaf akka dafamee birmatamu kara karaa iyyuu barbaachisa. Lakkoofsi ummata beela’ee meeqa, warri mana dhabee sharaa kana keessa cisaa jiru meeqa, kan dhukkubsatee waldhaansa hin argatin meeqa? Kun hundi dafee qoratamee qaamota dhimmi laaluuf gabaafamee dafamee lubbuu lammiilee keenyaa kana baraaruun duula qaamota hundaa tahuu qaba.